Indawo yokuhlala eChic kwidolophu endala - I-Airbnb
Indawo yokuhlala eChic kwidolophu endala
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguFrank
Okwangoku, ukufika kuvumeleke kuphela phantsi kwe-migca!
Iflethi yethu, ekwindawo ethe cwaka kodwa ekwindawo enye (umz. imizuzu eyi-5 xa usiya emarikeni okanye kwiSt. Annen Church), sisandul 'ukulungiswa ngoJanuwari 2020 kwaye ngoku uqeshisa ukususela ngoNovemba 2015.
Indawo yethu ibekwe kumgangatho we-mezzanine wendlu yethu kwaye yi-49m² ngobukhulu. Inepaseji encinci, ekhokelela kwigumbi lokuhlambela ngasekunene (ishawari yokuhamba ngemvula kunye nokufudumeza okuphantsi komgangatho), ngqo phambili kwigumbi lokulala elikhulu (ibhedi ephindwe kabini 1.60m ububanzi, kunye nebhedi) kwaye ngasekhohlo ukuya kwigumbi lokuhlala kunye i zekhitshi eqhotyoshelweyo yaxhobisa ngokupheleleyo kwaye ngokusebenzisa kwekhuselo Yahlula lokulala elincinane yesibini, umz abantwana (tsala-out imini ebhedini, 1,60 m ububanzi).
Ukuhlala (ngokukhethekileyo ngegrill) ekhoyo egadini.
Indawo esembindini: ababhaki, oonosilarha kunye neevenkile zokuthenga izinto zemihla ngemihla zikumgama wokuhamba. Ngokukwanjalo, isikwere semakethi (enokhetho olumnandi lwesidlo sakusasa), iindawo zokutyela, izitrato zokuthenga, amathuba okuzonwabisa (ichibi elikhuselayo, iPöhlberg), indawo yotywala endala, izinto ezibonwayo ...
Yi-22 km ukuya e-Oberwiesenthal, enokwenziwa kwimizuzu engama-30 ubuninzi.
Umbuki zindwendwe ngu- Frank
Inokwenzeka nangaliphi na ixesha, ukuba iyafunwa, kuba nathi sihlala endlwini ... ukuba akukho mntu, ngoko ngefowuni :)
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Annaberg-Buchholz